Fọlitii (Nolvadex) ntụ ntụ (54965-24-1) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / Ọgwụ PCT / Tamoxifen Citrate (Nolvadex) ntụ ntụ
SKU: 54965-24-1. Category: Ọgwụ PCT
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Tamoxifen Citrate (Nolvadex) ntụ ntụ (54965-24-1), n'okpuru ụkpụrụ CGMP na usoro nlekọta njikwa.
Igwe mmiri na-egbuke egbuke (Nolvadex)
Citrate (Nolvadex) nke Tamoxifen bụ ntụpọ
aha: Citrate (Nolvadex)
Molekụla Formula: C32H37NO8
Ọbara arọ: 563.64
Citrate (Nolvadex) ntụ ntụ na-eji eme ihe na steroid
Igwe mmiri na-egbuke egbuke
A na-akpọkwa ntụ ntụ nke Tamoxifen dị ka Nolvadex ntụ ntụ (CAS 54965-24-1).
Igwe na-emepụta akpụkpọ anụ nke Tamoxifen
(1) Ọkpụkpụ Ndị Na-eme Ihe Ọ Bụla Maka Ọrịa Uche:
Maka ọgwụgwọ ọrịa cancer metastatic n'ime ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke:
20 ka 40 mg na ọnụego A ghaghị inye ihe ndị ọzọ dị elu karịa 20 mg na ụtụtụ dị iche iche (ụtụtụ na mgbede).
Maka ịgwọ ụmụ nwanyị nwere Carcinoma Ductal na Situ, na-esote ịwa ahụ na ịwa radiation:
20 mg kwa ụbọchị maka afọ 5.
Iji belata ọrịa cancer ara na ụmụ nwanyị nwere nnukwu ihe ize ndụ maka ọrịa cancer ara:
(2) Umu Okenye Na - emekarị Maka Ọrịa ara - Adjuvant:
Maka ịgwọ ọrịa ara na-ada na-ada ada na ụmụ nwanyị postmenopausal na-eso kemtectomy ma ọ bụ mastectomy akụkụ, axillary dissection, na nku ara irradiation:
10 mg okwu 2 na 3 ugboro ugboro maka ụbọchị 5.
(3) Okenye na-emekarị agadi maka Ọrịa ara - Palliative:
10 na 20 mg ugboro abụọ n'ụbọchị
Aziza bara uru nwere ike ọ gaghị apụta ìhè ruo ọtụtụ ọnwa mgbe ịmalitere ọgwụgwọ.
(4) Ụdị Ọrịa Ụmụaka Ọrịa Maka McCune-Albright Syndrome:
Maka iji nwata nwanyị 2 ruo afọ 10 na ọrịa McCune-Albright na afọ ojuju:
20 mg otu ugboro n'ụbọchị. Ogologo oge ọgwụgwọ dị ruo ọnwa 12.
(5) Ọdịdị Pediatric Doual maka Precocious Puberty:
Mgbe ị na-ejide onwe gị na steroid ndị na-anabolic, ahụ dị mma iji gbanyụọ mmepụta nke orrogens ma ọ bụ hormones ụmụ nwoke, karịsịa testosterone. Iji mebie enweghi androgens, ahụ na-emepụta mmepụta nke estrogen.
N'ụzọ na-adọrọ mmasị, nkedo a na mberede na etiti nke estrogen na-akwalite nhapụ nke glycoproteins nke a na-akpọ hormone mmekọahụ-ejide globulins ma ọ bụ SHGB. Dị ka aha ha na-egosi, SHGB na-ejikọta ịhapụ hormonụ nwoke na nwanyị n'ime usoro ahụ ma gbanwee ha n'ime estrogen, na-ejikọta ọkwa testosterone ọbụna karị. Ọ bụrụ na anaghị edozi nke a n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ahụ ga-emesị nwee ahụhụ ahaghị ahụ.
Ịdọ aka ná ntị na Nolvadex ntụ ntụ
Ndị ọrịa cancer ara na Tamoxifen na-egosi na a na-ebelata cognition, mmetụta dị mkpa nke tamoxifen, na ọtụtụ ihe ndekọ ncheta. Otú ọ dị mmerụ ncheta na ndị ọrịa a na - emeso ya na tamoxifen adịchaghị njọ ma e jiri ya tụnyere ndị a na - ejikarị anast - rozole (onye na - egbochi aromatase) .Ọtụtụ ọnụ ọgụgụ ndị ọrịa cancer ara na - agwọ ọrịa na - enwe mmụba libido.
Otu akụkọ na September 2009 si Ọrụ Health and Human Services 'Agency for Health Research and Quality na-egosi na tamoxifen, raloxifene, na tibolone ji agwọ ọrịa kansa na-belata ọrịa cancer nke na-ebute aghara aghara aghara aghara aghara aghara aghara aghara aghara aghara aghara aghara aghara aghara aghara. .
A na - ejikọta ụfọdụ lymphedema nke obere aka na - eji tamoxifen, n'ihi ọbara mkpịsị ọbara na ọnyá thrombosis miri emi (DVT) nke nwere ike ịmalite ọgwụ a. Mkpebi nke ọbara ma ọ bụ DVT dị mkpa tupu a malite ibute ọgwụgwọ lymphedema.
Nolvadex ntụ ntụ bụ aha akara nke Tamoxifen Citrate ntụ ntụ, ụdị ọgwụ a na-emepụta dịka onye na-emepụta estrogen receptor modulator (SERM) ma bụrụ nke a na-emepụta dị ka ọgwụgwọ maka ụdị ọrịa cancer ara na ma ndị nwoke ma ndị nwanyị. Ọ na-agbaghasị omume nke estrogen na ahụ, nke nwere ike ịgafe sistemụ ngwa ngwa mgbe ọ na-eji steroid mee ihe.
Ngwá ọrụ SERM ndị ọzọ eji mee ihe na usoro ọgwụgwọ azụ bụ Torem-fareston na Clomid.
N'adịghị ka ndị na-emepụta aromatia nke nwere ike ịkwụsị arụmọrụ estrogenic ahụ, ọgwụ ọgwụ SERM dịka Nolvadex uzuzu na-egbochi mmepụta nke estrogen buru oke ibu na ọ gaghị ewepụ mmetụta dị njọ, ma ọ ka ga-ahapụ nke ahụ ka o jiri ya mee ihe nke ndị na-edozi ahụ na ọrụ metabolic.
Ka anyị nwee ngwa ngwa na nkwụsị mmetụta nke Nolvadex ntụ ntụ nwere ike ịpụ na ahụ mgbe eji PCT:
N'adịghị ka ndị na-emepụta aromatase (AI) dị ka Arimadex na Aromasin nke na-agbanyeghị mmetụta ọ bụla dị na estrogen-like na ahụ nke na-akpata site na enweghi ahaghị aka na testosterone, Nolvadex ntụ ntụ na-enyere aka weghachite mgbatị hormonal n'ụzọ nkịtị dịtụ iche ụzọ.
Ugbu a Nolvadex ntụ ntụ ka na-emebi ọrụ nke enzymes aromatase ma na-egbochi ha ịhapụ mmepụta oke na ntọhapụ nke estrogen, ọ dịghị egbochi ọrụ nke hormone luteinizing (LH) n'ụzọ ọ bụla. N'ebe kachasị mfe, LH na-elekọta ndị na-eduzi ndị na-emepụta ihe ndị na-eme ka ha ghara ịmịpụta na testosterone.
Ebe ọ bụ na Nolvadex ntụ ntụ na-arụ ọrụ n'emeghị nnyonye anya LH ọ bụla, iji ya eme ihe maka PCT ọ bụghị nanị na enye aka eme ka ahụ dị mma nke hormones mgbe ọ na-agba ụkwụ na steroid na ụbụrụ anabolic, mana ọ na-emekwa ka ọ bụrụ na ọ na-agba ọsọ na mmiri.
Igwe ntụ ọka Tamoxifen siri ike (CAS 54965-24-1)
Citrate (Nolvadex) ntụ ọka nke Tamoxifen
Esi zụta Tamoxifen Citrate powder (CAS 54965-24-1): zụta Nolvadex ntụ ntụ si aasraw
AASraw na-enye 99% ọcha Tamoxifen Citrate raw ntụ ntụ na bodybuilders ma ọ bụ n'okpuruala labs maka ojiji oral.
Nolvadex ntụ ntụ Ezi ntụziaka:
Ọ ka mma ka usoro ọgwụgwọ Post (PCT) dị mgbe ị na-ewere steroid
1 nyochaa maka Citrate (Nolvadex) ntụ ntụ nke Tamoxifen
Citrate (Nolvadex) nke Tamoxifen bụ ihe ọmụma